Dabeylo ku dhuftay xeebaha magaalada Hobyo – Radio Muqdisho
Dabeylo ku dhuftay xeebaha magaalada Hobyo
Dabeylo xoog leh ayaa lagu soo waramayaa in ay ku dhufteen deegaanno dhaca bariga gobolka Mudug.
Meelaha ay dabeeyluhu ku dhufteen waxaa ka mid ah xeebaha magaalada Hobyo, waxeyna dabeeylahaasi hakad geliyeen howlihii kaluumeeysiga.
Wariyaha Radio Muqdisho uga soo warama gobolka Mudug C/risaaq Maxamed Axmed ayaa soo sheegaya in dabeeylahaasi ay waxyeello gaarsiiyeen qaar ka mid ah doomihii kaluumeeysatada, wuxuuna intaasi ku daray in dabeeylahaasi awgood ay kaluumeystadi kari waayeen iney galaan badda.
Qiimaha kalluunka ayaa sare u kacay suuqyada magaalada Hobyo, kaddib markii ay hakad galeen howlihii kaluumeysatada, kaddib dabeeylo ku dhuftay xeebaha magaalada Hobyo.
Dhinaca kale biyo la’aan baahsan ayaa laga soo sheegayaa deegaanno hoos yimaada degmada Hobyo, taasoo saamen ku yeelatay nolosha dadka iyo duunyada,
Al-shabaab oo laga saaray degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo